Nyocha UMi SUPER na Spanish - Ike dị mma | Androidsis
N’oge ikpeazụ a anyị nọrọ na-anwale UMi SUPER, smartphone si China nke nwere ọnụahịa mara mma nke $ 199 maka atụmatụ ndị na-adọrọ mmasị ọ na-enye. Ka anyị lee nyocha nke UMi SUPER Na nkọwa zuru ezu.
Dika anyi kwurula na paragraf nke mbu, ihe mbu nke dakwasiri anyi banyere ngwaọrụ a bu ike o na-enye n'okpuru mkpuchi: 4 GB nke RAM, 32GB ROM, Android 6.0 Marshmallow na a Helio P10 Octa isi CPU, ha niile na-ahụkarị na ekwentị dị elu karịa UMi a.
1 Njirimara nke UMi Super
2 Ọnụ ihuenyo
3 UMi SUPER imewe
4 Formanrụ ọrụ, ebe kachasị ike
5 Igwefoto foto
6 4.000 mAh batrị
8 Uru na ọghọm
9 Zụta UMi Super
Njirimara nke UMi Super
Ọ bụrụ na ị bụ otu n'ime ndị na-achọ ọnụ na nnukwu atụmatụ mana achọghị ịmefu ego ahụ dị elu karịa ọnụahịa, mgbe ahụ ụdị dị ka UMi SUPER ka emere maka gị. Na njedebe ikpeazụ nke naanị 199,99 USD na-azụta ozugbo na Tomtop (na ị nwekwara ike ngbanye site na € 10 site na iji koodu ego ego Super10), UMi na-enye gị:
5,5-anụ ọhịa ihuenyo na 2.5D imewe na HD mkpebi zuru oke (pikselụ 1.920 x 1.080).
4 GB nke Ram (LPDDR3)
32GB ROM enwere ike ịgbasa ruo 256 GB site na iji kaadi microSD
Nhazi 10-isi MediaTek Helio P8
13 megapixel igwefoto isi na n'ihu 5 megapixel
Puerto Typedị USB-C
Batrị 4.000 mAh 4.35V
Mkpisiaka agụ digital
UMi biara ka iwere a 5,5-inch ihuenyo na FullHD nke arụpụtara site Sharp ọ na-echebekwa ya site na Gorilla Glass 3. Na ọkwa nke agba na nkọ nke onyinyo ahụ, nsonaazụ ya dị ezigbo mma ma jigide mmetụta nke ogo zuru oke nke ọnụahịa ahụ nyere. Naanị nsogbu anyị chọpụtara bụ na ihuenyo ahụ na-enwe mmetọ na mkpịsị aka mkpịsị aka dị mfe ma maka smartphone iji hụ enweghị ntụpọ anyị ga-ehicha ya ọtụtụ oge.
UMi SUPER imewe
N'azụ UMi Super
UMi SUPER nwere a sober na mara imecha. Ekele ya maka igwe ihe eji otu igwe, ọnụ ya na-enye mmetụta nke nnukwu ike na nguzogide.
Na azụ anyị pụrụ ịhụ UMi logo, mkpisiaka agụ, igwefoto na abụọ flash.
Otu n’ime isi ihe kacha emetụ ngwaọrụ a aka bụ ọkpụrụkpụ ya na oke ibu ya. Ihe batrị 4.000 mAh na ihuenyo 5,5-inch nwere mmetụta abụọ a, mana anyị ka kwenyere na 195 gram na 8,5 mm bụ data nke O doro anya na enwere ike ịka mma ma kaa akara ahịrị nke SUPER
Formanrụ ọrụ, ebe kachasị ike
Ma ugbu a, anyị ga-erite uru ndị UMi SUPER nyere, nke doro anya isi ike ya na ogo ọnụahịa. UMi nwere ike ịga isi na isi ya na njedebe dị elu na-enweghị mgbagwoju anya ọ bụla. 10-bit, 64-core Helio P8 processor ya na 4GB nke LPDDR3 RAM na-arụ ọrụ nke ọma na ụdị ngwa na egwuregwu niile.
Ọzọ ọ joyụ dị ukwuu bụ ọnụnọ nke A gam akporo 6.0 Marshmallow. Sistemụ nrụọrụ na-abịa na-enweghị ihe ọ bụla arụnyere na ngwa, nke enwere ekele mgbe ọ na-abịa na-edebe ohere disk kachasị n'efu site n'otu ụbọchị.
O nwekwara USB ụdị C ọdụ ụgbọ mmiri na mkpisiaka agụ dị ka ihe dị na ngwaọrụ dị iche iche.
Igwefoto 13 megapixel UMi SUPER
Na ọkwa igwefoto ọ na-abịa kwadebere ya na igwefoto isi 34172 megapixel Panasonic MN13 nke na-arụ ọrụ nke ọma. Ọ bụghị igwefoto kachasị mma n'ahịa (karịsịa na ọnọdụ dị ala) mana ọ na-arụ ọrụ ahụ. Igwefoto n'ihu nwere 5MP na ihe mmetụta GalaxyCore nke zuru oke iji were onwe ya ziri ezi mana na-enweghị nnukwu ọfụma.
4.000 mAh batrị
Dịka anyị kwuburu, batrị UMi bụ ihe ịtụnanya ebe ọ bụ na anyị na-ekwu maka 4.000 mAh nke na-enye ọnụ ya enwee obodo ruru 45 aka. Ekele maka teknụzụ na-ebu ngwa ngwa ngwa ngwa nke PE + anyị jisiri ike batrị zuru ezu na-erughị awa 2. Ejiri ya site na ụdị C, nke pụtara na ọ bụrụ na anyị nwere igwe okwu ma ọ bụ batrị ndị ọzọ na-adabaghị na ụdị ọdụ ụgbọ mmiri a, anyị ga-eji ihe nkwụnye ọkụ.
5,5 inch ihuenyo
USBdị USB, C, mkpịsị aka mkpịsị aka, wdg.
Nnukwu ibu na nha
Ihuenyo ahụ ruru unyi na mkpịsị aka
Zụta UMi Super
A na-ere UMi SUPER na TomTop nwere a ego site na 199,99 USD. Ma ugbu a, ị nwere ike nweta mbelata nke € 10 maka ụlọ nkwakọba ihe gị na Europe site na iji koodu nkwado Super10.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nyocha » UMi SUPER nyocha, ike na oke ego
Kedu ka iji tunyere Vernee Apollo Lite?
Zaghachi Pablo Caro
Ha bụ ndị abụọ yiri nnọọ ọnụ na okwu nke arụmọrụ. Igwefoto vernee dịtụ mma karịa na ọkwa dị arọ Vernee Apollo Lite dị ntakịrị ọkụ nke enwere ekele. Ma ndụ batrị ka UMi mma.
Daalụ nke ukwuu. My lg g2 adịworị maka nnọchi m na-achọ ndị ọzọ.
Guysmụ okorobịa, kedu ihe ị chere maka otu egwuregwu a na-akwado ihe niile? https://www.youtube.com/watch?v=lN5cRd_Gu_8&feature=youtu.be PO
Zaghachi Maicol Andres Taboada
Ule Ule ohuru na ihe eji eme ihe maka Geekbench 4
Minima Player, ihe ọkpụkpọ egwu ọhụrụ maka gam akporo nwere ngosipụta dị egwu nke na-ekwe nkwa ọtụtụ